သနပ်ခါးမေ: November 2014
By **~ မြတ်ကြည်~** 10:43 PM အသားအ​ရေ ထိန်းသိမ်းနည်း
ဝက်ခြံတွေက ရာသီလာခါနီးဆို တခါတခါ စိတ်ကူးပေါက်ပြီးထထ ပေါက်တတ်ပြန်ရော။ နားသယ်စပ်တို့၊ မေးတဝိုက်တို့မှာ ပေါက်တာလေးတွေပေါ့။ ဝက်ခြံပေါက်ပြီး နီနေတဲ့နေရာလေးတွေ ၄ ရက်နဲ့ ပျောက်အောင်လုပ်လို့ရတယ် လျှို့ဝှက်ချက်ရှိတယ်။ ဘာလဲသိလား?
ဝက်ခြံရှိတဲ့နေရာလေးတွေကို ငှက်ပျော်သီး အခွံရဲ့အတွင်းပိုင်း ညိုလာတဲ့ အထိပွတ်ပေးပါနော်။ ပြီးရင် ၁၀ မိနစ်လောက်စောင့်ပြီး ရေကြက်သီးနွေးလေးနဲ့ ဆေးလိုက်ရုံပဲ။
ငှက်ပျော်သီးအစိမ်းထက် အမှည့်က ပိုအာနိသင်ရှိပါတယ်။ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အောက်က ပုံလေးက ၄ ရက်အတွင်း တိုးတက်လာတဲ့ ပုံပါ။
ငှက်ပျော်သီးအခွံမှာ lutein လို့ခေါ်တဲ့ antioxidant ရယ်၊ potassium ဓာတ်ရယ်ကြွယ်ဝတဲ့ အပြင်၊ ရောဂါပိုးကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။
ငှက်ပျောသီးအခွံကို ဝက်ခြံအရောင်ကျစေတဲ့ နေရာအပြင် သွားဖြူစေဖို့၊ အသား ဝင်းဖို့၊ ပါးရည်တွန့်တာ၊ မျက်အိတ်ဖောင်းတာ အတွက်လည်း သုံးကြပါတယ်။
တကူးတကလည်းရှာဝယ်စရာမလိုလို့ အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဝက်ခြံအမာရွတ် ကျန်မှာ မပူရတော့ဘူးပေါ့။
Credit : Beautytips4her
လက်ဆောင်လေးထုပ်ပိုးပြီးပြီ။ ပေးဖို့ပဲကျန်တော့တယ်။ မနက်ဖြန် ဘယ်သူရတယ်ဆိုတာ facebook မှာ ကြေငြာပေးပါမယ်နော်။ <3
Mascara 101 & Giveaway
By **~ မြတ်ကြည်~** 6:30 AM မျက်​နှာ အလှပြင်​ makeup
ဒီတစ်ပတ်အတွက် လူတိုင်းလိုချင်တဲ့ မျက်တောင်အတုလေးလို ထူထူကော့ကော့လေးဖြစ်ဖို့ mascara ဆိုးနည်း လျှို့ဝှက်ချက်လေးကို ဝေမျှပေးဖို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။
1. မျက်တောင် ထူထူလေးရဖို့ eyelash curler နဲ့ ကော့ပြီးတဲ့ အခါ mascara မထပ်ခင် ဆက်ကြား ဘရပ်ရ်ှလေးနဲ့ ပေါင်ဒါပါးပါး လိုက်သုတ်ပါ။ တချို့တွေ baby powder သုံးကြတယ်။ ရလဒ်က မကွာပါဘူး။
2. နှစ်ထပ် သုံးထပ်ကော့ပါ။ တစ်ခါကော့ပြီးရင် ၂ မိနစ်လောက်စောင့် ပြီးမှ နောက်တစ်ထပ် ထပ် ပေးပါနော်။ မခြောက်ခင် ထပ်မိရင် မျက်တောင်တွေ ဟိုပူးဒီပူးနဲ့ အခဲခဲ အလုံးလုံးတွေ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ကြည့်မကောင်းဘူးဟုတ်။ နောက်တစ်ခုလုပ်နိုင်တာက ကော့တံကို တစ်သျှူးပေါ် တခါလောက် ဖြန့်ပြီး တခါတခါ ကော့တံကို ထုတ်လိုက်ရင် ပိုပြီးပါလာတဲ့ mascara တွေကို ဖယ်လိုက်ပါနော်။
3. မျက်ထောင်ထူချင်ရင် ကော့တံကို အလျားလိုက်ကိုင်ပြီး တစ်ချောင်းချင်းစီကို ရှည်ချင်ရင် ဒေါင်လိုက်ကိုင်ပြီး ဆိုးပေးပါ။
4. မျက်တောင်ဆိုးတဲ့အခါ ကော့တံကို မျက်တောင်အောက်ခြေကနေ အဖျားထိ ပင့်တင်လိုက်ပြီးရင်ပဲ ကိစ္စကြီး ပြီးမြောက်သွားပြီ မထင်ပါနဲ့။ :D အထူအပါး ညီညီ ညာညာလေး ဖြစ်ဖို့ မျက်တောင် ကော့နေတဲ့အချိန် ဘယ်ညာနည်းနည်း ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ပြီးကော့ပါနော်။
5. ဘယ်နေရာလွတ်သွားလဲ ပြန်ကြည့် ပြီး ကျွတ်ကြဲနေတဲ့ နေရာလေးကို ကော့တံ အဖျားလေးနဲ့ တစ်ချောင်းချင်းစီ လိုက်တင်ပေးပါ။ လိုင်နာ အရည်လေးနဲ့ လိုက်တို့လည်းရတယ်နော်။ ထိန်းရ ပိုလွယ်တာပေါ့။
Extra tip : မဆိုးတာကြာပြီမို့လို့ mascara တွေ ပျစ် ခြောက်ပြီး ဆိုးလို့မကောင်းတော့ဘူးလား? ရေနွေးလေး ခဏ စိမ်ထားလိုက်ပါနော်။
သနပ်ခါးမေ စာဖတ်သူများသို့ (Please read this)
မြတ်ကြည် ဒီ ဘလော့လေးမှာ ဆောင်းပါးလေးတွေကို တပတ်တခါ၊ facebook မှာတော့ တိုတိုထွာထွာလေးတွေကို ၂ရက်ကို ၁ ခါလောက် ပုံမှန် တင်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်တင်တာနဲ့ ဖတ်ချင်တယ်ဆို မြတ်ကြည်ရဲ့ သနပ်ခါးမေ စာမျက်နှာလေးကို Like လုပ်ထားလိုက်ပါနော်။ တော်တော်များများတော့ လုပ်ပြီးသားနေမှာ။ :D
ဘာလို့ဆိုတော့ facebook page မှာ LIKE တစ်ထောင်ပြည့်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ လက်ဆောင်ပေးဖို့ လုပ်ထားပါတယ်။ (၈၉ ယောက် ကျော်ပြီးမှ တရေးနိုး) လက်ဆောင်လေးက ကကြီးက ပါးနီ အရည်လေးပါ။ အမှုန့်သုံးတာနဲ့ ကွာပြီး မျက်နှာနဲ့ ပိုတသားတည်း ဖြစ်တယ်။ မြတ်ကြည်သုံးတာ ကုန်ခါနီးမို့ ထပ်မှာထားတာ။ ကွကို အတွက်တစ်ခု၊ စာဖတ်သူအတွက်တစ်ခု။ တစ်လုံးကမီးထွန်းဖို့၊ တစ်လုံးက ကက်စိ ဖွင့်ဖို့။ lol :P
အလှကုန် အသစ်လေး စမ်းသုံးကြည့်ချင်တယ်ဆို ဒီအောက်က လင့်လေးကို click ပြီး ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အထဲမှ အကြိုက်ဆုံး ပို့စ် ခေါင်းစဉ်လေး တစ်ခုကို comment မန့်ခဲ့ပေးပါနော်။
မန့်ပေးတဲ့ သူတွေထဲမှ ပြန်ရွေးမှာမို့လို့ပါ။
(ဒီတစ်ခေါက်တော့ လက်ဆောင်လေးကို ပြည်တွင်းပဲ ပို့ပေးနိုင်တော့မယ်။ :( ဟိုမှာမရှိတော့ ပြည်ပကို ပါဆယ်ပို့ရတာ အရင်လောက်မလွယ်လို့ နားလည်ပေးပါနော်)
Thanks all and please feel free to participate in my little giveaway event. :)
Post by သနပ်ခါးမေ.
By **~ မြတ်ကြည်~** 6:08 AM မျက်​နှာ အလှပြင်​ makeup
နှုတ်ခမ်းနီကို ပန်းရောင်တို့၊ အနီရောင်တို့ ဆိုးရတာ ငြီးငွေ့နေပြီဆို ဒီရာသီအတွက် အသားရောင် နှုတ်ခမ်းနီလေးက မှန်တင်ခုံပေါ်မှာ ထားသင့်တဲ့ အရောင်တစ်ခုပေါ့။ ဟုတ်တယ်၊ အသားရောင်က လူတိုင်းနဲ့ မလိုက်ပါဘူး။ တချို့အရောင်တွေဆို ဆိုးလိုက်ရင် လူပါ ဖြူဖတ်ဖြူရော်ဖြစ်သွားရော။ Nude color ထဲမှာမှ ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် shade လေးတွေ ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်နော်။
အသားဖြူတဲ့သူဆိုရင် ပန်းရောင်နှောတဲ့ အရောင်လေးတွေကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ စာဖတ်သူက အသား မဖြူမညိုပဲ ဝါတဲ့ အထဲကလား? ကိုယ့်အသားရောင်ထက် နုတဲ့ အရောင်တွေကို ရှောင်ပါ။ မသိရင် မိတ်ကပ်ကြီးပဲ နှုတ်ခမ်းမှာ လိမ်းထားသလိုလို။ :P အသားဝါတဲ့ သူတွေအတွက် peach (မက်မန်း/သန္တာ)အရောင် သမ်းတဲ့ အသားရောင်တွေဟာ အလိုက်ဖက်ဆုံးပါပဲ။ အသားညိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ အညို ဘက်သမ်းတဲ့ အရောင်တွေကို ရွေးချယ်ပေးရမှာပါ။
အောက်ခံကို ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အရောင်လေးဆိုးပြီး အပေါ်က အသားရောင်ထပ်ပေးလို့လည်းရတယ်နော်။ အသားရောင်အစစ်တွေက ရှာရလွယ်တယ်။ :)
ဒီလိုအရောင်လေးတွေက နှုတ်ခမ်းခြောက်တာတို့၊ အရေးအကြောင်းတို့ ရှိနေခဲ့ရင် ဆိုးလိုက်တဲ့အခါ ပိုပေါ်သွားတတ်ပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ nude colored lip လေးရဖို့ lip scrub လေးလုပ်၊ lip balm လေးဆိုးထားပြီးမှ အသားရောင်လေး အပေါ်က ထပ်ဆိုးပေးပါနော်။
ပျိုမေတွေ အားလုံး အလှတွေ ပိုနိုင်ကြပါစေရှင်။
By **~ မြတ်ကြည်~** 2:35 PM အာဒမ်နဲ့ပတ်သက်၍
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အဝေးမှာရှိနေပြီး ချစ်ရတာက လွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အနေဝေးရင် သွေးအေးတယ်ဆိုတဲ့ စကားလည်းရှိတယ်မဟုတ်လား။ ဒီကြားထဲ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတွေ့ရတော့ သံသယလေးတွေ ဝင်တတ်ပြန်ရော။
တစ်ယောက်တစ်နေရာစီ ရှိနေရတဲ့ ချစ်သူတွေ အတွက် အကွာအဝေး ဆိုတဲ့ ရန်သူတော်ကြီးကို ကို အောင်မြင်စွာ တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ သော့ချက်လေးတွေ ကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်ရှင်။
"တကယ်တော့ ဒီလူကို ကိုယ်တကယ်ချစ်ရင် အကွာအဝေးဆိုတာ နံပါတ် တစ်ခုပါပဲ။" စစ်တမ်းတစ်ခုမှာ အနေဝေးတဲ့ စုံတွဲတွေဟာ အတူရှိတဲ့ လူတွေထက် ဖောက်ပြန်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများမနေပါဘူး။ ဆိုလိုတာက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဘယ်လောက်ချစ်တယ်၊ တန်ဖိုးထားတာနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။
ချစ်တယ်ဆို အချိန်နည်းနည်းဖဲ့ပေးပါ။ ကိုယ့်နားနေချိန်ထဲကဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ အခုခေတ်မှာ ပိုက်ဆံ သိပ်မကုန်ပဲ အသံကြားချင်တယ်ဆို viber ရှိတယ်၊ ရုပ်မြင်ချင်တယ်ဆို skype လည်းရှိတယ်။ အရင်ကလို အဝေးမှာနေရတာ မခက်ခဲလှပါဘူး။ အချိန်မရရင်လည်း missed call လေး အပြန်အလှန်ပေး။ သတိရတဲ့အခါဖုန်း logထုတ်ကြည့်ရတာ ကြည်နူးစရာ တစ်ခုပါပဲ။
ရန်မဖြစ်ဖူးတဲ့ စုံတွဲရယ်လို့မရှိပါဘူး။ အနည်းနဲ့ အများတော့ဖြစ်ကြတာပါပဲ။ ရန်ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ အခါ၊ ရန်ဖြစ်တုန်းက သူ ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေကို မေ့လိုက်တာကောင်းပါတယ်။ စိတ်ဆိုးတုန်းက သူပြောခဲ့တာတွေကို တနုံ့နုံ့နဲ့ ပြန်ခံစားနေရင် ရန်ဖြစ်တစ်ခါဖြစ်တိုင်း အစိုင်အခဲ တိုးတိုးလာမှာပါ။ သူနဲ့ပတ်သက်လို့ ကိုယ့်အပေါ် ကောင်းခဲ့တာလေးတွေ ပြန် စဉ်းစားပြီး ၁ က ပြန်စလိုက်ပါနော်။
လက်ဆောင်လေးတွေ ပို့လို့ရသလို၊ သူ့အတွက် အလွမ်းပြေ video file လေးတွေ လုပ်ပေးလို့ရတယ်။ နောက်မြတ်ကြည်တို့ဆို ဒီနေ့ ကြက်ဆီထမင်း ချက်မယ်ဆို ချက်နည်းကို youtube ကကြည့်၊ နှစ်ယောက်အတူတူချက်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး facebook တင်ကြတယ်။ နှစ်ယောက်နာမည်နဲ့ လှူတာတို့၊ birthday ကိတ်အတူတူခွဲတာတို့ကလည်း အမှတ်ရစရာပါ။
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အဝေးမှာမို့လို့ စိတ်မချရဘူး ရယ်လို့ မရှိပါဘူး။နဂိုတည်းက မတည်ငြိမ်တဲ့သူက ဝေးဝေး နီးနီး ဖောက်ပြန်ချင်ရင် ဖောက်ပြန်မှာပါပဲ။ ယုံကြည်မှု မရှိတဲ့ relationship က ဆီမထည့်ထားတဲ့ ကားပေါ် ဝင်ထိုင်နေရသလိုပါပဲ။ ကားပေါ်မှာသာရှိတာ။ ဘာ ခရီးမှ မတွင်ပါဘူး။ နှစ်ယောက်အချစ်ကို တန်ဖိုးထားတယ်ဆို စောင့်ထိန်းသင့်တာတွေ သူစောင့်ထိန်းပေးမှာ မို့လို့ ယုံကြည်မှု အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ ထားပေးလိုက်ပါနော်။
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်တွေ့ရချိန်တွေနည်းတော့ တွေ့ရင် စိတ်ချမ်းသာစရာလေးတွေပဲ ရွေးပြောချင်ကြမှာပါပဲ။ သူနဲ့ ရန်ဖြစ်ရမှာစိုးလို့ ကိုယ်က မပြောဘဲထားတဲ့ အရာတွေ က တခါတလေ အကြီးအကျယ် ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ ပြော ပြလိုက်လို့ စိတ်ဆိုးရင် အချိန်တစ်ခုထိပဲ ခံရမှာ။ ကိုယ်ကမပြောပဲ သူ့ဘာသာ တခြားက ပြန်သိရင် သူ့အပေါ် လျှို့ဝှက်ထားတဲ့ တခြားအရာတွေများရှိဦးမလား ဆိုပြီး သူလည်း စိတ်မဖြောင့်တော့ဘူး။ ယုံကြည်မှုဆိုတာ တစ်ခါ ကြေပြီးရင် အကောင်းတိုင်းပြန့်ဖို့ သိပ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ စက္ကူပါး တစ်ရွက်လိုပဲ။
Long distance relationship မှာ လည်း သူ့အချိန်အတိုင်းအတာနဲ့ သူရှိပါတယ်။ မတွေ့တော့တာ ကြာတဲ့ အခါ အေးတိအေးစက်နိုင်လာတာ အမှန်ပါပဲ။ ဒီ အခြေအနေ မှာပဲ ကျေနပ်ရင် ဇာတ်မျောကြီး နဲ့ပဲ အဆုံးသတ်သွားမှာပါ။ လက်ထပ်ဖို့အထိ ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆို တချိန်မှာ အတူရှိနေဖို့ ကြိုးစားရမှာပါပဲ။ လက်ထပ်ဖို့ အဆင်မပြေသေးတဲ့ အခိုက်မှာလည်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြန်အလှန် တွေ့နိုင်ဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ကျောင်းပိတ်တဲ့ အခါ သွားတွေ့တာမျိုးပေါ့။
အခုချိန် ခဏဝေးရတာဟာ တချိန်မှာ အမြဲတူတူရှိနိုင်ဖို့ဆိုတာလေး မှတ်ထားရင် စိတ်အတွက် ခွန်အားဖြစ်စေမှာပါ။ ဘယ်သူမဆို ဘယ်ခွဲနေချင်ပါ့မလဲနော်။ ဒါပေမယ့် ဝေးနေတဲ့ အချိန်မှာ ခိုင်မြဲတဲ့ အချစ်ဟာ ပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ သူ တကယ် ချစ်မချစ် စမ်းသပ်ဖို့ အခွင့်အရေး ဘုရားကပေးတာလို့လည်း မှတ်လို့ရတာပါပဲ။း)
မြတ်ကြည်တို့လည်း long distance နဲ့ အချိန်အကြာကြီး ဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း ဖြတ်သန်းနေရတုန်းပါပဲ။ Long distance နဲ့ အထူးဇွဲဆု ဆွတ်ခူးမယ့် သူတွေလေ။ :P
သာယာ ပျော်ရွှင်ဖွယ် နေ့ရက်တွေကို ချစ်ရသူနဲ့ အတူ ဖြတ်သန်း နိုင်ကြပါရှင်။